Posted by Tranquillus | May 8, 2018 | Kobcin xirfadeed
Boss, maamulaha iyo mararka qaarkood asxaabta waxay ka qaybqaadan karaan dejinta jawiga sunta ah ee shaqada.
Sida loo aqoonsado dadka waxyeelladaada ku haya shaqada iyo gaar ahaan sida looga takhaluso, halkan waa talooyinkeena.
Si aad u ogaatid farqiga:
Si aan uga soo baxno cimilada sunta ah ee shaqada, waa in aan marka hore aqoonsannaa dadka masuulka ka ah.
Tallaabadani maahan mid aad u fudud, maxaa yeelay waa lagama maarmaan in la kala saaro dadka kaliya ee ka careysiiya kuwa dhab ahaantii sunta ah.
Sidaas daraadeed waa noocyada 5 ee dadka sunta ah ee sida ugu fiican looga fogaado shaqada.
bida The : meel fog iyo qabow, dadka meeldhexaadka ah ayaa niyadjabaya. Waxay u arkaan kuwa kale inay yihiin qalabyo lagu kobciyo kalsoonida.
Shirkadda ama xanta: xantu waxay xoogooda ka qaadataa masiibada dadka kale waxayna kaliya xiiseeyaan cilladaha xirfadlaha ama nolosha shaqsiyadeed ee asxaabtooda.
Qanjaha : qanjirada waxaa lagu aqoonsadaa niyadiisa xun, ujeedadiisu: in lagu waxyeeleeyo dadka kale si ay u helaan raaxo gaar ah. Si sahlan ayaad u fahmi kartaa, sidaa daraadeed si degdeg ah ayaad u deyn kartaa.
Xirfadaha jilayaasha : ma xakamaynayaan shucuurtooda iyo inay weeraraan kuwa kale iyaga oo u maleynaya inay masuul ka yihiin xajmigooda. Way adag tahay in laga takhaluso, sababtoo ah jilayaasha waxay la ciyaaraan dareenadeena waxayna naga dhigtaa dareemo dambi.
Kuwaasna waa caasiyiinta Kuwani waa dadka ugu badan ee ku haysta dhibaatooyin waaweyn shaqada. Waxay iska dhuuntaan kalsoonidooda been abuurka ah oo dhab ahaantii muujinaya shaki weyn.
Sidee looga baxaa jawiga sunta ah ee shaqada?
Si aad uga baxsato jawiga sunta ah ee shaqada, qaladka ugu horeeya ee aan la galin waa inuu galo cayaartooda.
Run ahaantii, dhaqankoodu ma raacayo macquul ah, waa wax aan sax ahayn, sidaa daraadeed waa wax aan faa'iido lahayn si ay uga jawaabaan.
Sidaas darteed ka bixi niyadda xun waa lagama-maarmaan in la is-fili karo marka ay sii jirto feejignaanta, sababtoo ah waa inay aqoonsadaan dabeecadaha sunta ah si ay u doortaan habka ugu wanaagsan ee looga baxsan karo.
Waxaan badanaaba u maleyneynaa in aan la shaqeyneyno dadka sunta ah ee aan macquul ahayn in la baxsado.
Marka qofka sunta ah la ogaado, dabeecaddiisu waxay noqotaa mid la saadaalin karo, sidaa darteedna way fududahay in la fahmo.
Waxay noo ogolaanaysaa in aan ka fikirno si qumman oo ku saabsan marka aan taageerno iyo marka aynaan u baahnayn.
Waxaa suurtagal ah in aad xaddidid ilaa inta aad si firfircoon u sameyso oo aad u sii dheeraato mudada dheer.
Waxaa muhiim ah in aan loo oggolaan in sidaas la sameeyo, waxay ka fogaaneysaa in xaalado adagi jiraan.
Adiga oo xadeynaya xaddiga, waxaanu go'aamin karnaa goorta iyo sida qofka suntu u maareeyo.
Kadibna waxay u sahlan tahay in laga baxo jawiga sunta ah.
Waxyaabaha ugu adkaa waa in ay joogaan mid ka mid ah booskiisa oo xajiyaan xuduudaha marka uu qofku isku dayo inuu soo dhaafo, oo ay had iyo jeer sameeyaan.
Xaaladda shaqada sunta ah: sida loo soo saaro? Agoosto 19th, 2018Tranquillus
horeSidee si firfircoon uga shaqeyn kartaa meel bannaan?
socdaSidee kuugu guuleysan kartaa inaad isku kalsoonaatid shaqada?